Ampahany amin'ny boky: fantaro izay rehetra ananan'ny boky ao anaty sy ivelany | Famoronana an-tserasera
Ampahany amin'ny boky
Encarni Arcoya | | maro
Raha nanapa-kevitra ny hanao pirinty sy hamoaka boky ianao dia arahaba soa! Minoa azy na tsia, ny fanoratana boky dia fomba iray hamoahana ny eritreritrao ary, na inona na inona vakiana na tsia, na mahomby ianao na tsia, dia efa mila miavonavona ianao fa nahavita azy. Saingy, rehefa mamoaka dia zava-dehibe ny hahalalanao hoe inona ny ampahan'ny boky, na ivelany na anatiny.
Ary eo no ilainay manampy anao. Avy eo dia hiresaka momba ny inona isika Ampahany amin'ny boky, samy malaza sy tsy be mpahalala. Liana? Ataovy.
1 Ilay boky sy ireo faritra ao aminy
2 Karazana ampahan'ny boky
2.1 Ampahany ivelany amin'ny boky
2.1.1 Palitao vovoka
2.1.3 Sarony aoriana
2.1.4 Saran'ny faktiora
2.2 Ampahany ao anaty boky
2.2.1 Takelaka fahalalam-pomba
2.2.2 Lohateny Bastard
2.2.3 Sarona anatiny
2.2.4 Credits na pejy zon'ny
2.2.6 Teny fampidirana, fampidirana, fampidirana
2.2.7 Vatan'ny boky
2.2.11 Glossary of terms
Ilay boky sy ireo faritra ao aminy
Ho an'ny rehetra, ny boky dia misy fonony izay misy ny fonony aloha sy aoriana ary ny ao anatiny, misy ny tantara. Saingy tsy mahafantatra zavatra hafa betsaka izy. Na izany aza, ity fananana ara-kolotsaina ity izay tsy dia ekena firy ankehitriny (sy fampiasana) izy io dia mazàna amin'ny ampahany maro amin'ilay boky, ary samy manana ny asany manokana ny tsirairay amin'izy ireo, izay manampy ny mpamaky hanana traikefa tsara, hahatsapa ...
Tsy sarotra ny fahalalana azy rehetra. Ary tsy voatery ho tonian-dahatsoratra na mpamorona ianao vao hahaliana azy ireo. Ity dia fomba iray manome lanja ny zava-drehetra izay ao anatin'io zavatra io. Te hahafantatra izay ao anatiny ve ianao?
Karazana ampahan'ny boky
Manomboka amin'ny filazana aminao izahay fa ny boky dia azo zaraina roa: ny ivelany sy ny ao anatiny.
Ny ampahany ivelany dia ilay misy ny fonony aloha sy hazondamosina ary ny lamosiny, fa raha ny tena izy dia betsaka ny zavatra tsy fantatra. Ho an'ny ampahany, ny ampahany anatiny dia ilay manarona ireo pejy nilazana ny tantara. Ary na izany aza, misy ny lamina sy ny ampahany ilaina.
Ampahany ivelany amin'ny boky
La Ny ampahany ivelany amin'ny boky ankehitriny dia notsorina ho "rakotra" tsotra. Saingy misy singa maro ao anatiny ao. Ireo dia:
Momba ilay fonony izay manarona ny boky tanteraka miaro fonony hafa. Raha atao teny hafa, dia misy ireo boky sasany mitondra (fonony mafy indrindra) mba hiarovana bebe kokoa ilay boky.
Izy io dia mety hitovy amin'ny fonony arovany, na mety tsy hitovizany amin'ny iray hafa.
La fonony azontsika atao ny milaza fa takatra amin'ny fonony izao. Izy io dia ny faritra ivelany iray manontolo izay miaro ny atiny, izany hoe izy roa dia ny fonony aloha, ny hazondamosina ary ny fonony aoriana.
Eo amin'ny fonony dia ho hitanao ny lohatenin'io boky io, ny mpanoratra, ny mpanonta, ary koa ny synopsisn'ny sanganasa (ao aoriana) ary ny kaody fisoratana anarana ISBN an'ny asa.
Araka ny hitanao, ny fonony aoriana dia lamosin'ny fonony. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia io no ampahany avela famintinana manintona ny zavatra ho hitan'ny mpamaky ao anatin'ny boky.
Azo antoka fa amin'izao fotoana izao dia mieritreritra momba an'io akanjo io ianao ary maka sary an-tsaina zavatra mitovy amin'ny boky. Ary ny marina dia tsy diso ianao, fa tsy tanteraka. Ny fehikibo dia izay ravin-taratasy izay mamihina matetika ny fonony na palitao vovoka ary izany dia mazàna ampiasaina hanasongadinana zavatra momba ny boky, ohatra ny nomeraon'ny fanontana, ireo kopia amidy, fa izy io dia am-boalohany ny fampifanarahana andian-tantara, sns.
Raha ny tena izy dia tsy ilaina izany, fa haingon-trano fotsiny ary tsy dia fahita firy izy ireo.
Ny hazondamosina, miaraka amin'ny fonony sy ny fonony aoriana, dia izay ampahany amin'ny faritra ivelany iray manontolo. Io no toerana itazan'izy ireo ny takelaka anatiny rehetra ananan'ilay boky, ary ny habeny dia hiankina amin'ny isan'ny pejy ananany.
Toy ny amin'ny faritra hafa amin'ny boky, eto Izy io dia misy ny lohateny, ny anaran'ny mpanoratra, ny mpanonta ary, raha tafiditra ao anaty fanangonana, ny anarany na ny hajia.
Farany, ao anatin'ny faritra ivelany ao amin'ilay boky, manana ny sarony isika. Izy io dia aforeto anatiny izay matetika ao anatin'ny palitao vovoka hamihina sy hametahana azy amin'ny boky, izay misy fampahalalana momba ny mpanoratra, ny mpanonta na boky hafa izay ao anatin'ny mpanoratra na ny fanangonana sy ny mpanonta.
Ampahany ao anaty boky
Ankehitriny rehefa mizara ny ampahany ivelany isika amin'ny faritra samihafa, tonga ny fotoana hahafantarana ilay anatiny. Na izany aza, alohan'ny hidirana amin'io lohahevitra io dia te hiresaka aminao momba ny mpiambina izahay.
Ireo maro ireo voasokajy ho singa ao amin'ny faritra ivelany, fa ao anatiny izy ireo. Ireo dia pejy izay mifatotra amin'ny fonony anatiny miendrika diptych, manatevin-daharana ny fonony sy ny ravina voalohany ao anaty ny boky (ny tsinainy).
Ao amin'ny boky misarona ihany no ampiasana azy ireo, ary ny asany dia ny manome tsy fitoviana bebe kokoa ny atitany mba tsy hahavery ny pejiny. Indrindra fa amin'ny ankamaroan'ireo boky ireo dia tsy mihetsika amin'ny rohy mankany anatiny ny hazondamosina, fa ny satroka farany kosa no mahomby.
Izany dia nilaza fa izao dia hiresaka momba ireo faritra anatiny ao anaty boky isika, dia:
Izy ireo dia a ravina roa sisa tavela, na amin'ny voalohany na amin'ny farany, izay manao "prelude" ary ho fiarovana mba tsy hiharatsy ny zavatra hafa rehetra. Ny sasany manadino handao azy ireo, saingy, tena ilaina tokoa izy ireo.
Antsoina koa hoe pejy lohateny, ity dia pejy tokana izay anoratana ny lohatenin'ny boky, tsy misy hafa. Tsy dia ampiasaina firy, raha ny marina, vitsy no mahalala an'io, fa izy no pejy mety indrindra anaovan'ireo mpanoratra sonia boky (ary raha ny marina dia ny asany).
Eto indray dia miverina miaraka amin'ny mpanoratra ny lohatenin'ny boky ary, indraindray, ny marika sy ny mpanonta izay mamoaka azy. Ity no malaza indrindra ary mbola ampiasaina.
Credits na pejy zon'ny
Ahitana taratra a fampahalalana amin'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ny sehatra teknika toy ny laharana fanontana, taona namoahana, mpanoratra, fandikan-teny, tahiry ara-dalàna, milina fanontam-pirinty, angona sary nampiasaina, mpanoratra ny fonony ...
Matetika dia andalana roa izy io, izay natokana ho an'ny olona iray na maromaro ny boky.
Teny fampidirana, fampidirana, fampidirana
Izy ireo no lahatsoratra izay miresaka amin'ny ankapobeny momba ny lohahevitry ny tantara. Na izany aza, amin'izao fotoana izao dia ampiasaina hanombohana ny firafitry ny boky, zavatra tsy mety nefa dia miha hita hatrany hatrany.
Raha ny marina, na ny sasin-teny, ny teny fampidirana na ny fampidirana dia fampidirana ho an'ny mpanoratra hanazava ny antony nanapahany hevitra hanoratra io boky io, na mba hiresahan'ny olon-kafa momba ny mpanoratra.
Ity no ampahany afovoan'ny asa, izay misy ny fitantarana. Matetika zarao toko na fizarana hanampiana ny mpamaky hamarana tsikelikely ny tantara (ary hiato kely).
Safidy tsy maintsy atao izany, misy ny mpanoratra mametraka azy ireo na tsia mba hanome ny fikitika farany an'ilay asa.
Izy io dia pejy iray miresaka amin'ny mpamaky ny mpanoratra ary toerana misy ny fanehoan-keviny momba ny asany ary misaotra ireo olona nanamora ny fivoahany.
Ao no anangonana ireo toko na faritra anatiny, ary koa ny pejy nanombohany, mba hahafahan'ny mpamaky mahita ny boky amin'ny ankapobeny ary mankamin'ny pejy manokana mahaliana azy.
Izany dia fanazavana ny teny sasany izay no ampiasaina. Na dia mpanoratra maro aza no mampiasa fanamarihana ambany pejy, indraindray lava loatra ilay fanehoan-kevitra ka mila ampahany manokana ao amin'ilay boky izy ireo.
Lisitr'ireo sanganasa, pejin-tranonkala, sns. nifampidinihana.
Ankehitriny dia azonao atao tsara ny mahafantatra ny ampahany rehetra amin'ny boky.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ampahany amin'ny boky
Tranokala sary 5 misy efamira vonona alaina
Fitaovana 7 hamoronana sarintany misy hevitra amin'ny Internet sy amin'ny findainao